Fabio Capello oo ka warbixiyay ciyaaryahanka noqon kara badalka Cristiano Ronaldo ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Fabio Capello oo ka warbixiyay ciyaaryahanka noqon kara badalka Cristiano Ronaldo ee kooxda Real Madrid
(Real Madrid) 15 Okt 2018. Macalinka reer Talyaani ee Fabio Capello ayaa go’aamiyay ciyaaryahanka ku haboon ee badalka u noqon kara Real Madrid booskii uu kaga baxay Cristiano Ronaldo.
Macalinkii hore kooxaha Juventus iyo Real Madrid ayaa wareysi uu ku bixiyay radio Rai ee dalka talyaaniga in weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi uu yahay xidiga noqon kara badalka Cristiano Ronaldo ee kooxda Los Blancos.
“Waxaan taageere u ahay weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi, hadii aan ku sugnaan lahaa Real Madrid isla markiiba waan lasoo saxiixan lahaa, waa ciyaaryahan ku wanaagsan xerada ganaaxa, sida uu soo ahaa Cristiano Ronaldo xiliyadii dhawaa ee lasoo dhaafay”.
“Waa ciyaaryahan u muuqda goolka isla markaana dareemaya, waxaa jira dad yar inta si wanaagsan u garaneysa sida loogu dhaqaaqo gudaha xerada ganaaxa, hadii aad saddex kubadood u dhex dhigto xerada ganaaxa saddexdaba way dhalin doonaan”.
Si kastaba Icardi oo xirfadiisa kubadda cagta kasoo bilaabay Barcelona, ayaa qeyb kasoo noqday kooxda Inter Milan tan iyo sanadkii 2013, wuxuu kusoo guuleystay labo jeer ee ah gool dhalinta horyaalka dalka Talyaaniga, xili ciyaareedkii 2014-2015, wuxuu ku qaaday 22 gool, sidoo kale 2017-2018 ayuu ku qaaday 29 gool.
Kabtankii Arsenal Mertesacker oo OOYIN Jabsaday kaddib markii lagu badelay AABIHIIS Ciyaar socota....+SAWIRRO